जीवन अवश्य बदलिन्छ, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस यो सफलताको मुल मन्त्र - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा जीवन अवश्य बदलिन्छ, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस यो सफलताको मुल मन्त्र
जीवन अवश्य बदलिन्छ, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस यो सफलताको मुल मन्त्र
चाखलाग्दो कुरा admin November 18, 20200Comment
सफलता मुल मन्त्र । आफ्नो लक्ष्य तिर बढ्दै गर्दा, एक व्यक्ति धेरै पटक आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी अरूको शब्दहरुमा अधिक ध्यान दिन सुरु गर्दछ। व्यक्तिको यो बानीले उसलाई सफलताको मार्गबाट ​​पछाडि धकेल्नेछ र असफलताको अनुहार हेर्न बाध्य पार्छ। आउनुहोस् हामी यो सत्यताबाट सफलता प्राप्तिका लागि जरुरी मुल मन्त्र जानौँ ।
निक्कै तातो गर्मी थियो। एक जना बाबु आफ्नो छोरासँग गाउँको कच्चि बाटो घोडामा गइरहेका थिए । छोरो १७ वर्षको र बुबाको ४२ बर्षका थिए । बुबाले आफ्नो छोरालाई घोडामा राखे । बुबा घोडाको पछिपछि थिए। दुई जना ठट्टा गर्दै खुशी र आनन्दका साथ आफ्नो घरतिर लागेका थिए। बाटोमा एक जवान मानिस भेटिए ।
उनले भने यो कस्तो किसिमको जवान छोरो हो । १७ बर्षको भइसक्यो । बाबुलाई हिँडाएर आफु घोडामा छ । त्यो मान्छेले त्यसो नभनुन्जेल बाबु छोरा खुशी थिए । बाबुपनि आफ्ना छोरालाई घोडामा बसाए । आफु घोडा डोर्याउन पाउँदा नै खुशी थिए । कम्तिमा मेरो छोरापनि घोडा चढ्ने भयो भन्दै गर्व गरिरहेका थिए ।
तर त्यो बुद्धिमान जस्तो मानिसको कुरा सुनेपछि बाबु छोरा दुबैलाई लाज लाग्यो। छोरा तुरुन्तै घोडाबाट उत्रियो र आफ्नो बुबालाई घोडामा राख्यो। अब बुबा घोडामा छन् छोरा हिंड्दैछन् । अलि आधा किलोमिटर अगाडि गएका थिए फेरी अर्को बुद्धिमान मानिस भेटियो । उसले फेरी भन्यो बाबुपनि त अझै लक्क जवान नै छ । यो छोरालाई घोडचढी सिक्न दिएको थियो भने के हुन्थ्यो । कस्तो सोसकी रहेछ । कलिलो छोरालाई हिँडाएको छ । आफु घोडामा चढेको छ ।
बाबुलाई लाग्यो मैलेपनि गल्ती गरे । उ तुरुन्तै घोडाबाट ओर्लियो । अब दुबैजना घेडामा चढ्न तयार भएनन् । लोकको लाजले उनीहरु अब दुबै हिड्ने र घोडालाई डोर्याउने निधो गरे । तिनीहरू दुवैले घोडा लिएर हिंडे। अलि अगाडी गएपछि फेरी केही व्यक्तिहरूको समूह भेटियो । उनीहरुले त बाबु छोरालाई खिसी नै गरे। तिमीहरु त मुर्ख हौ ।
यस्तो बलवान घोडा किनेर दैनिक पोसेका छौ । खाना दाना ख्वाएका छौ । घोडामा नचढेर पैदल हिँडिरहेका छौ । दुबै बुद्धि नभएका मुर्ख हौ । मानिसहरुको गाली सुनेर उनीहरुको मस्तिष्क हल्लियो । हुनपनि हो । शक्तिशाली घोडा छ । दैनिक दानापानी दिएको छ । तर उसलाई डोर्याइएको छ । यसो गर्दा आफुहरुलाई थकाईपनि लाग्यो घर पुग्न ढिलापनि भयो ।
दुबै अलमल्लमा परे। त्यसपश्चात दुबै जना घोडामा चढ्ने निर्णय लिए । किनकी घोडापनि बलवान थियो । दुबै जना बोक्न सक्ने थियो । केही पर पुगे । त्यसपछि केहि मानिसहरु भेटिए । उनीहरुले त झनै हप्काए । एउटा घोडामा दुई दुई जना । पशुलाई यो के गरेको ।
उनीहरुको हप्काइले बाबु छोरालाई झनै पिर पर्यो । दुबै तुरुन्तै घोडाबाट तल झरे र रूखमुनि बसे। दुवैले सोच्न थाले कि संसारले हामीलाई कुनै पनि परिस्थितिमा बाँच्न दिदैन। बुबाले छोरालाई भने छोरा हेर जब तिमी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौ । तब समाजका धेरै मानिसहरूले तिम्रो खुट्टा समात्नेछन्। तर तिमी बलियो रहनु । आज हामीलाई यही पाठ सिकायो ।
यो कथाबाट यही पाठ सिकाएको छ
१. आजका जताततै नकारात्मकताको वातावरण छ । तपाईंको उदेश्यतर्फ जब तपाईं अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै व्यक्ति तपाईसँग सबै प्रकारका कुरा गर्नेछन्। त्यहाँ धेरै खुट्टा तान्ने कोसिस हुनेछन् । तर तपाईले अरूको नकरात्मक चीजहरूलाई बाइपास गरेर सफलताको यात्रामा निरन्तर अगाडी बढ्नु पर्छ।
२. आवश्यकता यो हो कि हामीले हामीलाई कमजोर बनाउने प्रत्येक आवाजलाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ। यसमा ध्यान दिनुको सट्टा तपाईको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुहोस्। अनि मात्र सफलता चुम्नेछ ।
यो सबैका लगि अति जरुरी सन्देश आफुले पढिसकेपछि सबैका लागि सेयर गर्न नभुल्नुहोला ।